«Marathon international de Tana» : atleta vahiny 20 hifampitana amin’ny Malagasy | NewsMada
«Marathon international de Tana» : atleta vahiny 20 hifampitana amin’ny Malagasy
Par Taratra sur 13/10/2016
Hangotraka ny andiany faha-16 amin’ny «Marathon international de Tana». Firenena efatra no handefa solontena hifaninana amin’ireo atleta malagasy. Hisy koa atleta tompondaka eran-tany, ho avy.
Handefa mpifaninana eto Madagasikara hiatrika ny andiany faha-16 amin’ny “Marathon international de Tana”, hatao ny alahady 16 oktobra ho avy izao, i La Réunion, izay hanana mpihazakazaka 14. Tsy fantatra kosa anefa na ao anatin’ireo ho tonga eto Madagasikara i Jean François Lebon, nandrombaka ny andiany faha-15, tamin’ny taon-dasa na tsia.
Atleta roa avy kosa ny an’i Maorisy, i Afrika Atsimo ary i Kenya. Tonga omaly ry zareo Reonioney, raha amin’ny asabotsy kosa vao ho avy ny Kenyanina sy i Afrika Atsimo.
Ankoatra izay, handray anjara amin’ity koa eo amin’ny “Maratoons”, mirefy 1, 5 km, ilay Frantsay, Laurence Fisher, tompondaka eran-tany intelo teo amin’ny karate ary i Mbar N’Diaye, laharana fahadimy olympika.
Nomarihin-dRamanantsoa Andriamahazo Norolalao, filohan’ny federasiona malagasin’ny atletisma, fa handeha hanatrika ny “Relais de St Benoit”, hatao atsy La Réunion ny 11 novambra ho avy izao, izay atleta mendrika, amin’ity “Marathon international de Tana” ity.
Ankoatra izay hisy koa ny hazakazaka ho an’ny daholobe, na ny “foulées ecolo” ary ny an’ireo atleta manana fahasembanana, na ny “handirun”, izay samy mirefy 10 km.
Marihina fa ankoatra ny hazakazaka, hisy koa “cabaret”, iarahana amin’i Fanja Andriamanantena, ny asabotsy.